Tuesday January 07, 2020 - 14:26:23 in Maqaallo by Wariye Tiriko
"Xaaladda Suldaanku aad bay u wanaagsan tahay. Ilaahay ducadii wuu aqbalay oo imika xitaa wuu fadhiisan karaa. Garashadiisu way joogtaa oo aad buu u fiican yahay, waxaanu helay daryeel caafimaad loo hagar-baxay, dawlad iyo ehelba.” Ayuu kaga jawaabay su’aal laga weydiiyey xaalada caafimaad ee Suldaan Maxamed .
"Dawladda JSL kaalin kaliya kumay lahayn ee guud iyadaa dammaanad-qaadday xaaladda caafimaad ee Suldaanka oo runtii ah nin Qaran oo dal iyo dad ba kaalin mug ah ku leh. Diyaarad caafimaad gaar ah ayay dawladdu kaga soo qaadday Hargeysa oo Addis Ababa lagu keentay. Maalintaa iyo maantana dawladdu way garabjoogtay. Safaaradda JSL ee Itoobiya oo kaashaynaysa ehelka Suldaanka oo iyana door muhiim ah qaatay, waxay kaalin mug leh ka ciyaareen daaweyntiisa, daryeel iyo duljoog intaba. Hadal markaan soo kobo, Suldaan Maxamed Qaranka Somaliland baa garabjooga, diyaarna u ah mustaqbalka Insha alaah.
"Caafimaadku sidiisaba wuu soo raagaa, Ilaahay fadligiisa mooyee, mar kaliya wax soo booda maaha, sidaa darted, waxaannu ilaahay ka baryaynaa inuu inta u dhiman caafimaadkana degdeg u siiyo. Xilliguu ka soo baxayo Cusbitaalka, isagoo caafimaad buuxa Ilaahay siiyey, dhakhaatiirta ayeynu ka sugaynaa marka ay ku taliyaan, imika jimicsigii baa loo bilaabay oo u socda.